3 ezahlukeneyo ze-Web Scraping Ways ukusuka kwi-Semalt
Ukubaluleka kunye nesidingo sokukhangela okanye ukuchithwa kwedatha kwiziko lewebhu ngokugqithiseleyo ngexesha. Ngokuqhelekileyo, kukho isidingo sokukhipha idatha kwiiwebhsayithi ezisisiseko neziphambili. Ngamanye amaxesha sikhupha idatha, kwaye ngamanye amaxesha sifanele sisebenzise isixhobo njengendlela yokukhupha idatha yedatha ayiniki iziphumo ezifunayo nezichanekileyo.
Ingaba uxhala malunga nodumo lwenkampani okanye i-brand, ufuna ukubeka ingqwalasela kwiintetho ze-intanethi ezungeze ishishini lakho, kufuneka wenze uphando okanye kufuneka ugcine umnwe ipulse yoshishino okanye imveliso ethile, uhlala ufuna ukutshintshisa idatha kwaye uyibuyisele kwifomu engagqitywanga ukuya kwisakhiwo esakhiweyo.
Lapha kufuneka sixoxe ngeendlela ezahlukeneyo ezintathu zokukhipha idatha kwiwebhu.
1. Yakha umququ wakho.
2. Sebenzisa izixhobo zokutshiza.
3. Sebenzisa idatha yangaphambili.
1. Yakha Umqhubi Wakho:
Indlela yokuqala neyona edumileyo yokujongana nesicatshulwa sedatha kukukwakha i-crawler yakho. Kule nto, kuya kufuneka ufunde ezinye iilwimi zeenkqubo kwaye kufuneka ube ne-firmware kwi-technicalities yomsebenzi. Uyakufuna kwakhona iseva engaguqukiyo kunye ne-agile ukugcina nokufikelela kwi-data okanye kwiwebhu. Enye yeenzuzo eziphambili zale ndlela kukuba i-crawlers iya kwenziwa ngokwezifiso zakho ngokwemfuno zakho, ikunikeze ulawulo olupheleleyo lwenkqubo yokukhupha idatha. Kuthetha ukuba uya kufumana oko ufuna ngokwenene kwaye unokwenza ufumane idatha ukusuka kumaphepha amaninzi ewebhu njengoko ufuna ngaphandle kokukhathazeka ngohlahlo lwabiwo-mali.
2. Sebenzisa ii-Extractor Data okanye i-Tools Scraping:
Ukuba ungumfundi webhulogi, umprogram okanye i-webmaster, unokungabi naso ixesha lokukwakha inkqubo. Ngeemeko ezinjalo, kufuneka usebenzise i-extractor zedatha okanye i-toolbar. Ngenisa. Io, i-Diffbot, iMozenda kunye neKapow zizinye zezona zixhobo eziphambili ze-web scraping zixhobo kwi-intanethi. Ziza zombini kwiinguqulelo zamahhala kunye ezihlawulwayo, okwenza kube lula kuwe ukuba uchithe idatha kwiziko lakho ozithandayo ngokukhawuleza. Inzuzo ephambili yokusebenzisa izixhobo kukuba abayikukhipha kuphela idatha kuwe kodwa iya kuququzelela kunye nokuyihlela ngokuxhomekeke kwimfuno kunye nokulindela. Akuyi kuthatha ixesha elininzi ukuseta ezi nkqubo, kwaye uya kuhlala ufumana iziphumo ezichanekileyo nezichanekileyo. Ngaphezu koko, izixhobo ze-web scraping zilungile xa sisebenzisana nesethi esipheleleyo sezinto zokusebenza kwaye sifuna ukubeka umgangatho weenkcukacha kwiinkqubo zokuqhawula. Kuyafaneleka kubafundi kunye nabaphandi, kwaye ezi zixhobo ziya kubanceda baqhube kakuhle uphando lwe-intanethi.
3. Idatha ePakishwe ngaphambili evela kwiWebhose. I Platform:
I-Webhose. Iqonga linika ithuba lokufikelela kwidatha echanekileyo kwaye efanelekileyo. Nesisombululo se-data-as-service (DaaS), akudingeki ukusetha okanye ukugcina iinkqubo zakho zokukrazula i-web kwaye uza kukwazi ukufumana iinkcukacha zangaphambili ezikratshiweyo kunye nezilungelelaniso lula. Konke okufuneka siyenze ukucoca idatha ngokusebenzisa i-APIs ukuze sithole ulwazi oluchanekileyo nolungileyo. Njengomnyaka wokugqibela, sinokufikelela kwiinkcukacha zewebhu zembali ngale ndlela. Kuthetha ukuba into elahlekile ngaphambili, siyakwazi ukufikelela kuyo kwifolda yokuFumana kweWebhose. io Source .